Home News Puntland oo qasab ku hergelisay gole deegaan oo aysan raali ka ahayn...
Puntland oo qasab ku hergelisay gole deegaan oo aysan raali ka ahayn shacabka Buuhoodle.
Wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladdaha hoose ee Puntland, ayaa goor dhowayd ku dhawaaqday liiska xidhibaanada cusub ee golaha degaanka degmada Buuhoodle ee gobolka Cayn.
Liiskaan oo ka kooban 25 xubnood, ayaa 7 kamid ah waxay yihiin dumar, sida ku cad warqada liiska xidlhibaanada.
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhaban-cad ayaa sheegay in si cadaalad ah oo hufan lagusoo xulay golaha degaanka Buuhoodle, isagoo sheegay in juhdi badan lagu bixiyay dhismahooda.
Marka la dhaariyo golahaan cusub, waxay saacadaha soo socda gelidoonaan doorasho lagu dooranayo gudoomiyaha iyo guddoomiye ku xigeenka degmada Buuhoodle.
HALKAAN HOOSE KA AQRISO MAGACYADA.